KMF/CNOE : Tsy manaiky ny fifidianana mialohan’ny fotoana -
AccueilRaharaham-pirenenaKMF/CNOE : Tsy manaiky ny fifidianana mialohan’ny fotoana
Tafapetraka ny birao vaovaon’ny komity mpanara-maso ny fifidianana, na ny KMF/CNOE taorian’ny fivoriambe nanatanterahana ny fifidianana. Lany hitantana izany mandritra ny dimy taona ny filohany vaovao, Andoniaina Andriamalazaray.
Araka izany, nanambara ny teo anivon’ny birao vaovao ny KMF/CNOE tamin’ny alalan’ny filohany, Andoniaina Andriamalazaray, fa tsy manaiky velively ny fanatanterahana ny fifidianana Filoham-pirenena mialohan’ ny fotoana izy ireo. Nambaran’ny filoha vaovaon’ity komity mahaleo tena ity ihany koa fa manoloana ny fahasahiranana sy ny toe-draharaham-pirenena, dia mitaky avy hatrany amin’ireo mpanao politika tsy ankanavaka, indrindra fa ireo olom-boafidy rehetra isan’ambaratongany, sy ireo olom-boatendry, izay nanankinana andraikitra eto amin’ny firenena, mba hampitsahatra avy hatrany ny kajikajy politika samihafa, fa kosa mba hanome vahana ny lamina sy fitantanana ahafahan’ny olom-pirenena tsirairay manao sy manatanteraka ny zara andraikiny amin’ny fampivoarana ny toe-piainany ho fampandrosoana ny firenena.
Voalazan’izy ireo ihany koa nandritra ny fampahafantarana ireo mpikambana eo anivon’ny birao vaovao, fa mba ho fanamafisana ny antso fanairaina izay efa nataon’izy ireo ombieny ombieny, dia hisy hetsika hanohanana ireo fitakiana voalaza rehetra ireo.
Ankoatra izay, raha ny fanazavana mikasika ny KMF/CNOE, dia voalaza fa fikambanana mahaleo tena, ary tsy miandany na miorina amina firehana politika izy ireo. Manda ihany koa ireo mety ho endrika fanavakavahana rehetra, sns.
Etsy andaniny, voalaza fa mafy orina sady andry sy tokin’ny olom-pirenena no vina hifamatoran’ny KMF/CNOE. Manaraka izany, ny herin’ny fikambanana dia miankina tanteraka amin’ny rariny sy ny tsy fiandaniana, ary ny fandraisana andraikitra, sns.